ခရီးသွားရတာ ကြိုက်တဲ့ ယောင်းလေးတွေ မဖြစ်မနေ See first လုပ်ထားသင့်တဲ့ ခရီးသွား ဘလော့ဂါ (၆)ယောက် - For her Myanmar
ဖတ်ပြီးရင် သွားပြီး See First လုပ်ထားလိုက်တော့နော်..
ခရီးတစ်ခုသွားတော့မယ်ဆိုရင် သွားမယ့်နေရာမှာ ဘာတွေ ရှိတယ်၊ ဘယ်လို တည်းခိုရတယ်၊ မြေပြင်အခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ် စသဖြင့် အခြေအနေတွေကို ဟိုးအရင်တုန်းကဆိုရင် စုံစမ်းလေ့လာဖို့ တော်တော် အလှမ်းဝေးတယ် ဆိုရမှာပါ။ ခုတော့ ခရီးသွားဘလော့ဂါတွေရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေကအစ စားစရာ မုန့်ပဲသွားရည်စာ အဆုံး အေးအေးဆေးဆေး သိနိုင်နေပြီလေ… တစ်ခုခု သိချင်တယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ Review လေးတွေ သွားဖတ်လိုက်ရုံ… ဆိုတော့ ခရီးထွက်ရတာ ဝါသနာပါတဲ့ ယောင်းယောင်းလေးတို့ ခရီးစဉ်အဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့ Review လေးတွေ ကြိုဖတ်ထားချင်တယ်ဆိုရင် အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်ဖို့ ဒီ ခရီးသွား ဘလော့ဂါ (၇)ယောက်အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
ကိုယ်တိုင် ခရီးသွားပြီး ကြုံလာရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို အရင်းအတိုင်း ဖောက်သည်ချတတ်တဲ့ မမပါ။ ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်၊ ပြည်ပ ခရီးစဉ်တွေအပြင် လူသိနည်းတဲ့ နေရာတွေကိုပါ သွားပြီး အသေးစိတ်ကိုပါ ပြောပြတတ်ပြီး ခရီးသွား ရီဗျူးတွေကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် ရေးပေးတတ်တာလည်း Travel by Naw Htike ရဲ့ ထူးခြားချက်ပါ။
Related Article >>> ခရီးသွားတဲ့အခါ ပိုပြီး အဆင်ပြေလွယ်ကူအောင် ဘယ်လို App တွေ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲသွားသင့်လဲ??
2. Travel Kueen
ခရီးစဉ်တစ်ခုအကြောင်းကို အချက်အလက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ၊ ကုန်ကျခဲ့တဲ့ စရိတ် အတိအကျနဲ့ ပြန်ပြီး ပြောပြပေးတတ်တဲ့ Travel Kueen လေးက ခရီးသွား ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေနဲ့ ဖမ်းစားတတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ခရီးစဉ်အလိုက် စိတ်ဝင်စားစရာ ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်း ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတတ်သေးတာမို့ Travel Kueen Page လေးထဲ ဝင်ကြည့်ဖြစ်မယ်ဆို ခရီးသွားဗဟုသုတလည်း ရသလို ပျင်းမှာလည်း မဟုတ်ဘူးနော်…
3. The Dream Travellers
ဒီ Page က တော်တော်လေး ထူးခြားပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီ Page ရဲ့ ဘလော့ဂါ မမက ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးလွယ်ပြီး နိုင်ငံတကာ ပတ်ပြီး Review တွေ ပေးနေတာမို့ပါ။ သဘာဝအလှတရားတွေ မပျက်စီးသေးတဲ့ နေရာတွေ၊ အရိုင်းဆန်ပြီး စွန့်စွန့်စားစားသွားလို့ကောင်းမယ့် နေရာတွေရဲ့ အလှတရားတွေကို The Dream Travellers Page မှာ အများကြီး တွေ့ရမှာပါ။ ခရီးစဉ်ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေနဲ့ အသေးစိတ်ကစ ဖော်ပြပေးထားတာမို့ ဒီခရီးတွေကို သွားချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းတို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ် နဲ့ အချိန်ကာလကို တွက်ချက်ရတာ ပိုပြီး လွယ်ကူစေမှာပါ။
သူကတော့ မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ ဒေသန္တရ အလှအပတွေနဲ့ နေရာဒေသ တစ်ခုချင်းစီက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အရာလေးတွေအကြောင်း အသေးစိတ်ရေးသားပေးနေတဲ့ Page လေးပါ။ ရိုးရှင်းတဲ့ပြီးသူသိနည်းနေသေးတဲ့နေရာတွေမှာလည်း သဘာဝအလှတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူရေးထားတဲ့ Review လေးတွေမှာ အတိုင်းသားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကကို Liang ရဲ့ အလန်းဆုံး ထူးခြားချက်ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။
5. My Khayee – မိုင်ခရီး
မိုင်ခရီးရဲ့ ချီလီဆိုရင်တော့ မသိတဲ့သူ သိပ်ရှိမယ် မထင်ပါဘူးနော်… အနည်းနဲ့အများတော့ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ခရီးသွား Review တွေအပြင် ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာ ပျက်စီးလာမယ့် အသားအရေအတွက် ထိန်းသိမ်းနည်းလေးတွေကိုပါ မျှဝေပေးတတ်သူမို့ ဝိုင်းချစ်ကြတာ ခံရသူလေးပါ။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ခရီးသွားကြမယ့် ယောင်းလေးတွေဆိုရင် My Khayee – မိုင်ခရီး Page မှာ သိလိုရာ သွားမေးလို့ရပါတယ်နော်..
I Love Travelling ဆိုတဲ့ Page မှာတော့ နိုင်ငံတကာ ခရီးစဉ်တွေကို အဓိက တွေ့ရမှာပါ။ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေကို ကိုယ့်ပလန်နဲ့ကိုယ် သွားချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက်တော့ ဒီ I Love Travelling ဟာ အားကိုးရာတစ်ခုလို့ ဆိုမယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်… နိုင်ငံခြား ခရီးတွေမှာ မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေ နဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံလေးတွေကို အမြတ်တနိုးဝတ်ပြီး ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်တတ်တာကလည်း I Love Travelling ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် မမေဇွန်ရဲ့ ချစ်စရာ အပြုအမူလေး တစ်ခုပေါ့…
ကဲ.. ဒီလောက်ဆို ယောင်းတို့ ခရီးထွက်ဖို့ စီစဉ်နေရင်း တစ်ခုခု သိချင်တာရှိရင် အလွယ်တကူ ရှာဖွေလို့ ရပြီပေါ့…
ဖတျပွီးရငျ သှားပွီး See First လုပျထားလိုကျတော့နျော..
ခရီးတဈခုသှားတော့မယျဆိုရငျသှားမယျ့နရောမှာ ဘာတှေ ရှိတယျ၊ ဘယျလို တညျးခိုရတယျ၊ မွပွေငျအခွအေနဘေယျလိုရှိတယျ စသဖွငျ့ အခွအေနတှေကေို ဟိုးအရငျတုနျးကဆိုရငျ စုံစမျးလလေ့ာဖို့ တျောတျော အလှမျးဝေးတယျ ဆိုရမှာပါ။ ခုတော့ ခရီးသှားဘလော့ဂါတှရေဲ့ ကြေးဇူးနဲ့ ရာသီဥတုအခွအေနကေအစ စားစရာ မုနျ့ပဲသှားရညျစာ အဆုံး အေးအေးဆေးဆေး သိနိုငျနပွေီလေ… တဈခုခု သိခငျြတယျဆိုရငျ သူတို့ရဲ့ Review လေးတှေ သှားဖတျလိုကျရုံ… ဆိုတော့ ခရီးထှကျရတာ ဝါသနာပါတဲ့ ယောငျးယောငျးလေးတို့ ခရီးစဉျအဆငျပွခြေောမှစေ့ဖေို့ Review လေးတှေ ကွိုဖတျထားခငျြတယျဆိုရငျ အလှယျတကူ ရှာတှနေို့ငျဖို့ ဒီ ခရီးသှား ဘလော့ဂါ (၇)ယောကျအကွောငျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော…
ကိုယျတိုငျ ခရီးသှားပွီး ကွုံလာရတဲ့ အဖွဈအပကျြတှေ၊ အတှအေ့ကွုံတှကေို အရငျးအတိုငျး ဖောကျသညျခတြတျတဲ့ မမပါ။ ပွညျတှငျး ခရီးစဉျ၊ ပွညျပ ခရီးစဉျတှအေပွငျ လူသိနညျးတဲ့ နရောတှကေိုပါ သှားပွီး အသေးစိတျကိုပါ ပွောပွတတျပွီး ခရီးသှား ရီဗြူးတှကေို စိတျဝငျစားစရာကောငျးအောငျ ရေးပေးတတျတာလညျး Travel by Naw Htike ရဲ့ ထူးခွားခကျြပါ။
Related Article >>> ခရီးသှားတဲ့အခါ ပိုပွီး အဆငျပွလှေယျကူအောငျ ဘယျလို App တှေ ဒေါငျးလုတျဆှဲသှားသငျ့လဲ??
ခရီးစဉျတဈခုအကွောငျးကို အခကျြအလကျ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ၊ ကုနျကခြဲ့တဲ့ စရိတျ အတိအကနြဲ့ ပွနျပွီး ပွောပွပေးတတျတဲ့ Travel Kueen လေးက ခရီးသှား ဓာတျပုံလှလှလေးတှနေဲ့ ဖမျးစားတတျတဲ့သူ တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ နောကျပွီး ခရီးစဉျအလိုကျ စိတျဝငျစားစရာ ဗီဒီယိုလေးတှကေိုလညျး ရိုကျကူးတငျဆကျပေးတတျသေးတာမို့ Travel Kueen Page လေးထဲ ဝငျကွညျ့ဖွဈမယျဆို ခရီးသှားဗဟုသုတလညျး ရသလို ပငျြးမှာလညျး မဟုတျဘူးနျော…
ဒီ Page က တျောတျောလေး ထူးခွားပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီ Page ရဲ့ ဘလော့ဂါ မမက ကြောပိုးအိတျတဈလုံးလှယျပွီး နိုငျငံတကာ ပတျပွီး Review တှေ ပေးနတောမို့ပါ။ သဘာဝအလှတရားတှေ မပကျြစီးသေးတဲ့ နရောတှေ၊ အရိုငျးဆနျပွီး စှနျ့စှနျ့စားစားသှားလို့ကောငျးမယျ့ နရောတှရေဲ့ အလှတရားတှကေို The Dream Travellers Page မှာ အမြားကွီး တှရေ့မှာပါ။ ခရီးစဉျရဲ့ ထူးခွားခကျြတှနေဲ့ အသေးစိတျကစ ဖျောပွပေးထားတာမို့ ဒီခရီးတှကေို သှားခငျြပါတယျဆိုတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ ကုနျကစြရိတျ နဲ့ အခြိနျကာလကို တှကျခကျြရတာ ပိုပွီး လှယျကူစမှောပါ။
သူကတော့ မွနျမာပွညျမှာရှိတဲ့ ပုနျးကှယျနတေဲ့ ဒသေန်တရ အလှအပတှနေဲ့ နရောဒသေ တဈခုခငျြးစီက စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ အရာလေးတှအေကွောငျး အသေးစိတျရေးသားပေးနတေဲ့ Page လေးပါ။ ရိုးရှငျးတဲ့ပွီးသူသိနညျးနသေေးတဲ့နရောတှမှောလညျး သဘာဝအလှတှအေမြားကွီးရှိနတေယျဆိုတာကိုသူရေးထားတဲ့ Review လေးတှမှော အတိုငျးသားတှမွေ့ငျနိုငျပါတယျ။ ဒါကကို Liang ရဲ့ အလနျးဆုံး ထူးခွားခကျြဖွဈနတေော့တာပါပဲ။
My Khayee – မိုငျခရီး
မိုငျခရီးရဲ့ ခြီလီဆိုရငျတော့ မသိတဲ့သူ သိပျရှိမယျ မထငျပါဘူးနျော… အနညျးနဲ့အမြားတော့ ကွားဖူးကွမှာပါ။ ခရီးသှား Review တှအေပွငျ ခရီးစဉျတဈလြှောကျမှာ ပကျြစီးလာမယျ့ အသားအရအေတှကျ ထိနျးသိမျးနညျးလေးတှကေိုပါ မြှဝပေေးတတျသူမို့ ဝိုငျးခဈြကွတာ ခံရသူလေးပါ။ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးပွီး ခရီးသှားကွမယျ့ ယောငျးလေးတှဆေိုရငျ My Khayee – မိုငျခရီး Page မှာ သိလိုရာ သှားမေးလို့ရပါတယျနျော..
I Love Travelling ဆိုတဲ့ Page မှာတော့ နိုငျငံတကာ ခရီးစဉျတှကေို အဓိက တှရေ့မှာပါ။ နိုငျငံခွားခရီးစဉျတှကေို ကိုယျ့ပလနျနဲ့ကိုယျ သှားခငျြတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျတော့ ဒီ I Love Travelling ဟာ အားကိုးရာတဈခုလို့ ဆိုမယျဆိုလညျး မမှားပါဘူးနျော… နိုငျငံခွား ခရီးတှမှော မွနျမာဝတျစုံလေးတှေ နဲ့ ရိုးရာဝတျစုံလေးတှကေို အမွတျတနိုးဝတျပွီး ဓာတျပုံလေးတှေ တငျတတျတာကလညျး I Love Travelling ရဲ့ ပဲ့ကိုငျရှငျ မမဇှေနျရဲ့ ခဈြစရာ အပွုအမူလေး တဈခုပေါ့…
ကဲ.. ဒီလောကျဆို ယောငျးတို့ ခရီးထှကျဖို့ စီစဉျနရေငျး တဈခုခု သိခငျြတာရှိရငျ အလှယျတကူ ရှာဖှလေို့ ရပွီပေါ့…
Tags: blogger, Liang, love, review, The Dream Travellers, Travel by Naw Htike, Travel Kueen, travle